साढे १४ लाख लिएर काठमाडौं हिँडेका सिँचाइ प्रमुख र इन्जिनियर पक्राउ -
साढे १४ लाख लिएर काठमाडौं हिँडेका सिँचाइ प्रमुख र इन्जिनियर पक्राउ
४ श्रावण २०७६, शनिबार १६:०७
दोलखा । १४ लाख ६८ हजार घुस रकमसहित सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दोलखा प्रमुख र इन्जिनियर पक्राउ परेका छन् । अख्तियारको टोलीले प्रमुख प्रकाश अधिकारी र इन्जिनियर भोगेन्द्र शाहलाई पक्राउ गरेको हो ।
अधिकारीको साथबाट १३ लाख ३८ हजार पाँच सय र शाहको साथबाट एक लाख २९ हजार एक सय पाँच रुपैयाँ बरामद भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।
घुस रकमसहित शुक्रबार साँझ दोलखाबाट काठमाडौं जाँदै गर्दा सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेबाट पक्राउ गरिएको प्रवक्ता कोइरालाको भनाई छ । उजुरीका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । उक्त रकम ठेकेदार र उपभोक्ता समितिबाट मिसनका रुपमा प्राप्त गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ ।
सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर प्रकाश अधिकारीले बिभिन्न उपभोक्ता समितिहरु तथा अन्य कम्पनिहरूसँग घुस रकम लिई बा. १ झ ५२८० नम्बरको सरकारी गाडिमा काठमाडौं आउँदै गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा अख्तियारबाट गएको टोलीले भक्तपुरको जगाती भन्ने स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।
उनीहरुसँगै सवारी चालक सुमन खड्कालाई बा १ झ ५२८० नम्बरको टोयोटा हाईलक्स गाडीसहित नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान कार्य भई अख्तियारले जनाएको छ ।
ढुवानी ठप्प पार्न बाध्य पार्ने भीसीटीएस प्रणाली खासमा के हो ?
अख्तियार, घुस रकमसहित
Prevपप्पु कन्स्ट्रक्सनको प्रेसर: असार मसान्तमा बिल पेश गरी तुरुन्त भुक्तानीको माग
दशैंबाट नारायणीमा ‘मिनी पानीजहाज’ चल्ने, एक पटकमा २ सय यात्रु बोक्नेNext